FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာဂျပန်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကတိကဝတ်ထှနျးလငျးပေးပါ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိသည်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » သတင်း » FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာဂျပန်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကတိကဝတ်ထှနျးလငျးပေးပါ
FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာဂျပန်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကတိကဝတ်ထှနျးလငျးပေးပါ
Baselight v5 ၏တန်ခိုးပြမှ FilmLight ရဲ့ဂျပန်နျဌာနခှဲ, FilmLight KK,
[လန်ဒန် - 08 နိုဝင်ဘာလ 2018]: FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 (Makuhari ရှုပ်ထွေး, တိုကျို, 14-16 နိုဝင်ဘာလမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲနှင့်အတူဂျပန်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုရန်၎င်း၏ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာကတိကဝတ်ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် #3311) ။ ဤသည်တိုကျိုမြို့ရှိ FilmLight ရုံး၏ငါးနှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့နှစ်ဦးစလုံးခြေတစ်လှမ်းနှင့်ဂျပန်စျေးကွက်များအတွက်, FilmLight ရဲ့အရောင်အဆင့်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း, Baselight v5 ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတခုအဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။
"ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပရီမီယံရုပ်မြင်သံကြားဂျပန်တွင်အကျယ်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းဖန်တီးမှု tools များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုကောင်းစွာထောက်ခံနေကြဖို့အရေးကွီးဖြစ်ပါတယ်" ဟု Koichi Matsui, FilmLight KK ၏ဦးခေါင်းကပြောပါသည်။ "ဂျပန်စက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတစ်ဦးအရောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ထားရှိခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖောက်သည်အကြားအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ဖို့သက်သေ, ငါဒီနှစ်အင်တာမီလန်ပျားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးနောက်ထပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်, Baselight v5, အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် suite ကိုအတွင်းနှင့်တည်းဖြတ်, VFX နှင့်360˚ VR နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နှစ်ဦးစလုံးဟာအရှုပ်ထွေးဆုံးနှင့်အချိန်-စားသုံး Workflows ချောမွေ့စေရန်ကူညီဆွဲဆောင်မှုအသစ်သော features တွေပေးထားပါတယ်။ အတူတူဆော့ဖျဝဲကိရိယာတန်ဆာပလာအပေါ်-set ကို visualization များအတွက် Prelight မှစ. , ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးအဆိုပါနေ့အလင်းရောင်နေ့စဉ်သတင်းစာများစနစ်နှင့်ယင်းတိုးချဲ့ Baselight Editions တည်းဖြတ်ရေးနှင့် VFX ဘို့အထိအဖြစ် high-powered Baselight ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ဘူတာ။
နယူးအင်္ဂါရပ်တွေကွဲပြားခြားနားသောအော်ပရေတာယခုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းမြင်ကွင်းတစ်ခုအလုပ်လုပ်နိုင်, ဖြစ်စေတိကျသောတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မျိုးစုံ Deliverable ကိုဖန်တီးရန်ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်အကိုင်း, ပါဝင်သည်။
HDR ကိုပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူသစ် Baselight လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းပြီးတော့ကိုသစ်စာရှိရှိယနေ့မျှော်လင့်ထားပေးပို့ပုံစံများ၏အလုံးအရင်းကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်သောတိုးချဲ့အကွာအဝေးနှင့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်အတွင်းရူပ, ဖွံ့ဖြိုးဆဲရည်ရွယ်သည်။ အသွေးအရောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ blocky ပျေါလှငျရှောင်ရှားရန်အကြိမ်ရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုနေချိန်တွင် Range Boost ဥပမာ,, သဘာဝကြည့်အောင်မြင်ရန်ရှုပ်ထွေး Spatial အပြောင်းအလဲနဲ့သုံးပြီး SDR ထံမှ HDR ကိုပုံတစ်ပုံ၏ dynamic range ကိုမြှင့်တင်ရန်တစ်ခုအလိုအလျောက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
တိုကျိုမြို့ရှိ Toei ဒစ်ဂျစ်တယ် Lab ကမကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သော Netflix, NHK နှင့်အခြား 4K / UHD အစီအစဉ်များအတွက်သူများအဖြစ်တီဗီဘဏ်ဍာမှာပစ်မှတ်ထားတစ်ဦးအပိုဆောင်း Baselight TWO စနစ်အားဝယ်ယူခဲ့သည်။
"Baselight v5 ဂမ်နှင့် VFX များအတွက် colourist ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာတိုင်းဖန်တီးမှုမသိမသာကွဲပြားတတ်၏," Soichi Satake, Toei ဒစ်ဂျစ်တယ် Lab ကမှာအကြီးတန်း Colourist ကဆိုသည်။ "အသစ်ကအခြေစိုက်စခန်းအဆင့်နှင့်အတူ, ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့အတိအကျသတ်မှတ်ချက်အပေါ်ကင်မရာကိုထိတွေ့ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပုံသဏ်ဌာနျမြိုးပှားနိုငျသညျ။ burnished အထူးများ၏ထိန်းချုပ်မှုအထူးသဖြင့်နက်ရှိုင်းသောမှောင်မိုက်အရိပ်သည်, ပိုမိုလွယ်ကူလွန်းဖြစ်လာသည်။ "
"FilmLight ရဲ့ 24 / 365 ထောက်ခံမှုကြှနျုပျတို့အတှကျကြီးမားတဲ့အကူအညီ, အထူးသဖြင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားရောဂါရှာဖွေနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "ဂျပန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ချိန်ချိန်ကအခြားနိုင်ငံများတွင်သူများအနေဖြင့်မတူပေမယ့် FilmLight အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်နိုင်သည်နှင့်ကျွန်တော်လိုအပ်သောအရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ features တွေပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ငါ Baselight ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကို၏လမ်းကြောင်းကိုကိုက်ညီလျှင်မြန်စွာတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရှာတွေ့နိုင်အောင် FilmLight မှထုတ်ပြန်သော, ရှိသမျှသစ်ကိုတောငျးဆိုခကျြ features တွေကတဆင့်အလုပ်လုပ်သည်။ "
Baselight v5 အင်တာမီလန်ပျား 3311 မှာခန်းမ3အတွက် Baselight TWO system ပေါ်တွင်နှင့်တဲ 2018 အပေါ် Baselight Editions အတွင်းသရုပ်ပြလိမ့်မည်။
FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာဂျပန်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကတိကဝတ်ထှနျးလငျးပေးပါ - နိုဝင်ဘာလ 8, 2018
FilmLight စစ်အေးတိုက်ပွဲ '' အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသား '' ရှာဖန်တီး - အောက်တိုဘာလ 29, 2018
ပံ့ပိုးမှုအပေါင်းအဖေါ်များဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမည် - အောက်တိုဘာလ 25, 2018
Baselight Editions Baselight v5 အရောင် grade ဖန်တီးမှု tools များ နောက်ဆုံးပေါ် မိုဃ်းလင်း filmlight အသိဉာဏ် branchingToei ဒစ်ဂျစ်တယ် Lab က အင်တာမီလန်ပျား 2018 ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Koichi Matsui MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Netflix NHK post ကိုထုတ်လုပ်မှု Prelight Soichi Satake ရှုပ်ထွေးသော Workflows ချောမွေ့ တိုကျို VFX	2018-11-08
ယခင်: တိုက်ရိုက်ပရိတ်သတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ - အသင်းများ, ကစားသမား, ပရိသတ်များ NOW ကက -Want
နောက်တစ်ခု: ATEME Bandwidth ချွေတာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနအမြင့်ဆုံးမှ VSTV K + ဖွင့်မည်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာဂျပန်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကတိကဝတ်ထှနျးလငျးပေးပါ" ။ https://www.broadcastbeat.com/filmlight-illuminates-commitment-to-japanese-creative-community-at-inter-bee-2018/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။